Zụta ọwa YouTube na monetized & ọwa YouTube maka ọrịre - AudienceGain
Uru gị sitere na Channel YouTube anyị na-echekwa echekwa
Ọwa ahụ tozuru oke iji mee ka mgbasa ozi vidiyo n'otu ntabi anya. Naanị ilekwasị anya na ịmepụta vidiyo ndị magburu onwe ha ma jiri ego nweta ha.
Enwela mgbe ị ga - ezute nsogbu mmụọ ọjọọ mgbe ịzụrụ.
Anyị na-ekwe nkwa na mgbe enyere iwu ọwa, ọ gaghị enwe ike ime mmụọ banyere izizi ọdịnaya nke ọwa ahụ. Anyị na-akwado gị ka ị rube isi na iwu ego iji rụọ ọrụ nke ọma.
Echiche na ndị debanyere aha dị adị.
N'ụzọ bụ isi, anyị dabere na nyiwe Social Media iji bulie nkwalite vidiyo. N'ụzọ dị otú a, vidiyo gị ga-erute ndị na-ege ntị nwere ike ịnwe otu niche ahụ ka anyị si enye echiche na ndị debanyere aha. N'ikpeazụ, anyị nwere ike ikwusi usoro bụ 100% nchekwa na iwu. Onwe-dobe nkwa!
Enwere ndị debanyere aha 1500-3000 na ọwa ahụ nwere ike inyere gị aka ịmepụta ọwa ahụ karịa ịmalite site na ncha.
100% nke vidiyo bụ nke izizi nke ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na ndị mepụtara ọdịnaya anyị tụlere ma nyochaa. Enweghị ikike nwebisiinka ma ọ bụ mmebi iwu.
Dịka, a jikọtara ọwa monetized na akaụntụ USA ma ọ bụ UK Google Adsense ugbua. Naanị ka anyị mara ma ị nọ mba ọzọ, anyị ga-adabere na nke ahụ iji nye gị akaụntụ Google Adsense kwesịrị ekwesị.
Nyefee ọwa ahụ mgbe ị natara ụgwọ. Nọmalị, ọ na-ewe oge 0-8.
Pụrụ iche: E wezụga na adịchaghị atụmatụ n'elu, anyị ga-akwado gị na redesigning ọwa Logo & Pụrụ Iche bulie gị ọwa si professionalism for free.
Ntị ndị na-ege ntị
Ọnụ ego dị ọnụ ala
Channel àgwà na ịpụ iche na-ekwe nkwa
Enwela mgbe ị ga - ezute nsogbu mmụọ ọjọọ mgbe ịzụrụ
Nkwado na ịdegharị akara ọwa & ọkọlọtọ n'efu
Enwere ndepụta nke njikọ njikọ maka ịhọrọ.
Enwere ndepụta nke njikọ njikọ maka ịhọrọ
Kedu ihe ndị a ga-eme iji nata ọwa ahụ?
Anyị ga-ezitere gị ozi zuru ezu gbasara Channel Monetized tinyekwa Gmail gị dị ka onye nwe ọwa n'ime awa ole na ole.
Mgbe nke ahụ gasị, anyị ga-akpọtụrụ gị iji kwado na ịme nchekwa ọwa, ịgbanwe akaụntụ Google Adsense, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ozugbo edoziri ya ma afọ juru gị n’ọwa ahụ, ọ pụtakwara na iwu ahụ agwụla.
Kedu ihe m ga-eme na vidiyo ndị dịlarị na ọwa ahụ?
N'usoro iwu YouTube, ha ga-agụ oge elekere Ọha maka ego. Nke ahụ bụ ịsịghị ihichapụ vidiyo na ọwa iji chekwaa ọnọdụ ego nke ọwa ahụ ruo mgbe ị ga - enweta elekere elekere 4000 na vidiyo nke gị ị ga - ebugo mgbe ị natara ọwa.
Enwere m ike ịgbanwe aha ọwa, niche, wdg ozugbo anyị natara ọwa n'aka gị?
Ee, kpamkpam, banyere ịgbanwe aha, paswọọdụ, Google Adsense na akaụntụ na ụfọdụ ozi ndị ọzọ dị mkpa na ọwa, Ọ ga-adị mfe. Agbanyeghị, ị ga-agbaso ntuziaka anyị ka o wee nwee nchekwa mgbe ị gbanwere ya, dị ka mgbe ị natara ọwa ahụ, Google ga-atụle IP ị ka batara ọhụrụ, yabụ ọ ga-ewe ụbọchị asaa iji nweta ọwa maara IP ọhụrụ. Ma echegbula, anyị ga-agbakwunye email gị dị ka onye nwe ọwa ọhụrụ ka ị nwee ike ijikwa ọwa ahụ ma ọ bụ bulite vidiyo dị ka ọ dị na mbụ n'ime ụbọchị asaa a.
Mgbanwe ọwa gbanwere ọwa na-emetụta ọnọdụ ego ọwa?
Ọ dịghị ma ọlị! Gbanwe niche ahụ emetụtaghị ọnọdụ ego ọwa. Enweghị nchekasị, anyị na-ekwe nkwa na. Kama ichegbu onwe gị, anyị ga-eduzi gị otu esi adọta ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ị gbanwere niche ọwa ahụ.
A ga-agwa m ka m gbanwee akaụntụ Google Adsense m?
Inwe akaụntụ Google Adsense mana ejighi n'aka etu esi ejikọ ya na ọwa Monetized? Enweghị nchekasị, anyị ga-akwado gị ka ijikọ ya na ibe gị n'enweghị nsogbu!
Kedu ka m ga-esi gbanwee aha ọwa gaa na akara m mgbe azụtara m?
Gbanwe aha akara nke ọwa dị mfe, ọ bụrụ na ị maghị na ndị otu anyị ga - eduzi gị site na nkwụsị iji gbanwee ya maka gị na nchekwa na nkata.
Enwere ego dị maka nnukwu iwu?
N'ezie. Kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ. Anyị ga-adabere na ire ere gị ma nye gị ọnụego dabara adaba iji rite uru na ya.
Site na ahụmịhe ọtụtụ afọ ka anyị bụrụ ndị na-eweta YouTube Channel maka ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ụwa niile, anyị ghọtara mkpa ndị ahịa iji wuo ọwa dị mma nke ga-enyere ndị mmekọ anyị aka imeju ebumnuche ndị ahịa nwere nnukwu ego.
Ka anyị bulie ọwa gị elu ma sonye na Mmemme Mmekọ YouTube
Mee ka Oge Dị mkpirikpi iru elekere 4000 elekere site na usoro iwu
nweta enyemaka site na ndị ọkachamara maka atụmatụ ka mma